Ao Amin’ny Amerika Vaovaon’I Trump, Hanorina Ny Rindrin’ny Fitserana i San Francisco · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Novambra 2016 5:10 GMT
Sarin'ny Rindrin'ny Fitserana ao amin'ny toerana faha-16 fandraisana fiara, ao amin'ny làlana BART ao San Francisco. Sary avy amin'ny pejy Facebook-n'ny Hetsika Mandan'ny Fiaraha-miory
Miaraka amin'ireo hetsi-panoherana an-jatony manohitra an'i Trump manerana an'i Etazonia, naorina tany amin'ny fiantsonan'ny fiaran-dalamby ambanin'ny tany any San Francisco ny Rindrin'ny fitserana iraisan'ny daholobe mba hanolorana fitsaboana itambarambe taorian'ny iray amin'ireo vanimpotoam-pifidianana faran'izy mampisara-bazana sy nampifanenjana indrindra tamin'ny tantaran'i Amerika.
Muriel MacDonald, Tamilla Mir, ary Melissa Goldman, ireo vehivavy telo ekipa mpandamina tao ambadiky ny tetikasan-javakanto iaraha-miasa ao San Francisco, dia nilaza fa “hetsika tamin'ny taratasy kely fandraikitra” nitovitovy tamin'izao natao tany New York no nanainga fanahy azy ireo, ary notapahan'izy ireo ny hevitra fa homena anarana “Rindrin'ny Fitserana ” ny tetikasan'izy ireo – amin'ny ampahany toy ny kilalaon-teny mikendry ilay fampanantenan'ny Filoha voafidy, Trump, hanangana rindrina eo anelanelan'i Etazonia sy Meksika.
Iray amin'ireo tanàna mivoatra indrindra any Etazonia i San Francisco, ary ny maro an'isa dia nifidy an'i Hillary Clinton. Tao amin'ity tanàna/faritra ity, 10 isan-jato monja no vato azon'ny Filoha-voafidy Trump, ary ny fampielezankeviny izay mivoy tsy fandeferana, fanavahana ny maha-lahy sy maha-vavy, ary fanavakavaham-bolonkoditra dia tsy azon'ny maro ekena, ao an-tanàna, ary hatramin'ireo mponin'i Kalifornia manerana ny fanjakàna, izay nahitana mpifidy efa ho roa avo heny amin'ny mpihidy no nanohana an'i Clinton noho i Trump.
Nanodidina ny olona telo arivo no nanohina ny antso ho an'ny hetsika “Rindrin'ny Fitserana ” ary tao anatin'ny 24 ora, taratasikely miloko marevaka efa ho an'arivony no nilahatra tamin'ireo rindrina tao amin'ny fiantsonan'ny fiarandalamby ambanin'ny tany miisa telo ao San Francisco.
Noforonina tany amin'ireo fiantsonana telo maro olona indrindra ao an-tanàna ny rindrina vonjimaika: ny 16th and Mission, ny 24th and Mission, ary Montgomery – ny roa amin'ireo ao amin'ny distrika Latina manan-tantaran'i San Francisco, The Mission. Vantany vao miakatra ny tohatra mekanika ireo mpandeha, dia hahita ireo taratasikely, markers fanoratana, ary naoty. Maro no variana mamaky ny fanamarihana fa ny sasany nanomboka nanoratra ny hafatra fanohanany teo amin'ireo taratasy.
Mampiasa ny tenifototra #WallofEmpathy iIreo mpiaramiasa ao ambadik'ilay tetikasa ary miantso ny tenany ho “Tafik'i Dumbledore” (manondro vondrona mpiady anaty akata noforonina tao anatin'ny lahatsary Harry Potter ary Lamin'ny Phoenix.) ary @DAGuerillas ety anaty haino aman-jery sosialy. Nanomboka tamin'ny 14 Novambra ny tetikasa ary hiaina hatramin'ny harivan'ny 18 Novambra, rehefa hanao famaranana ny hetsika amin'ny alalan'ny fanaovana mozika sy fafanakalozan-dresaka, mialoha ny handravàna ilay tetikasa zavakanto vonjimaika.
Ny “Tafik'i Dumbledore” dia manantena hanohy hamorona “asa ifotony ho an'ny zavakatom-bahoaka” mba hanoherana ny “fiantraikan'i Trump”. Nifandray tamin'i Tamilla Mirn, iray amin'ireo mpikarakara ny vondrona, ny Global Voices, izay azonao vakiana eto ambany ny tafatafa.
Global Voices (GV): Inona no nanentana anao manokana hikarakara ny Rindrin'ny Fitserana ?
Tamilla Mir (TM): Tamilla Mir (TM):Teraka tany Azerbaijan, tao ambadiky ny rindrina tany aminà firenena kaominista aho. Niandry roa taona aho mba ho tafaraka indray tamin'ny reniko teto Etazonia.Tsy fantatray izay mety hitranga fa hitady fiainana tsaratsara izahay, ny nofinofy Amerikana raha tianao. Nanohina mpifindra monina sy fianakaviana maro izay nandositra ny herisetra sy ny kolikolin'ny governemanta ny fifidianana tamin'ny herinandro lasa teo. Nony farany tonga ny Fitserana avy any amin'ny toeran'ny fangirifiriana sy famoizana ary izay no antony naniriako hampivondrona ny vondrom-piarahamonina sy hizara hafatra miabo hoe tsy irery izahay ary afaka mandresy na inona na inona mety hitranga ato anatin'ny efatra taona manaraka.
Ny Rindrin'ny Fitserana eo amin'ny fiantsonana “16th and Mission BART”. Sary avy amin'i @mzhangx mpampiasa Instagram
GV: Inona no nanaitra anao momba ny fandraisana anjara? Nisy asa nifamaly tafapetraka ve?
TM: Ny fanehoankevitra tsara betsaka no anisan'ny fandraisana anjara tsara indindra. Rehefa mitsangana eo alohan'ilay rindrina ianao ary mamaky ireo fanamarihana an-jatony izay milaza “Tiako ianao”, “Miaraka aminao aho”, “Ndao hitsangana miaraka”, manorina fihetsehampo mahery vaika izany. Ny alatsinainy, fony izahay nametraka ny fandaharanasa tamin'ny 7 ora maraina, nanana hafatra dimy izahay, nosoratanay ny telo tamin'ireo. Ora roa taty aoriana, nanomboka nanoratra ny olona, nony nifarana ny alatsinainy, feno ny rindrina manontolo ary nitohy hatrany izany. Ny tena nahafinaritra ahy dia ny mahita ny olona miakatra ny tohatra mekanika miaraka amin'ny fitaovana fihainoana, avy any nanao fanatanjahan-tena, na avy niasa, dia mijery, ary mamaky taratasy roa ary avy eo manapaka hevitra hanoratra zavatra tsara ihany koa. Ny hafatra tena nahafinaritra ahy dia “halako ianao, saingy tiako ianao”.
Sary avy amin'ny mpampiasa Instagram @DAGuerilla.
GV: Niteraka fiantombohan-dresaka hameno ny banga ve ilay rindrina?
TM: Nahita aho lehilahy nanao akanjo mihaja nizara sigara taminà olona tsy manan-kialofana, niresaka momba ny fanalalahana ny rongony izy ireo. Nisy lehilahy iray nohadihadianay ary nilaza fa tsy nitomany izy taorian'ny fifidianana, fa indroa nitomany tamin'ity herinandro ity. Niresaka taminà ramatoa iray miteny Espaniola aho, izay nonina teto Etazonia nandritra ny 26 taona ary nandoa hetra nandritra ny 20 taona, ary manana fahasarotana amin'ny fanazavana amin'ny zanany ny zavatra mitranga. Tamin'ny minitra farany no nitranga izany zavatra izany [ary] nampivondrona [maikamaika] nefa nampahazo toky ny mahita ireny resaka ireny mitranga.Te-hanao asa tsara kokoa izahay hampivondronana ny olona avy amin'ny fiaraha-onina samihafa amin'ny tetikasa hoavy.
GV: Lazao anay ny Momba ireo hafa mpikarakara. Ahoana no nahatonga anareo niaraka niasa?
TM: izahay sy i Muriel, mpiara-mikarakara amiko, dia efa mpinamana hatry ny ela. Nihaona tamin'ny alalan'ny namana ikambanana izahay. Nifampizarànay ny fahatairana sy alahelo lalina taorian'ny fifidianana tamin'ny herinandro lasa. Te hanao zavatra hafa ankoatry ny mamaky lahatsoratra ao amin'ny Facebook na mandefa hevitra amin'ny rindrin'ny namana izahay. Nentiny Melissa, izay nanampy anay hanohina ny haino aman-jery ary nikarakara nandritra ny hetsika. Manantena izahay ny mbola hanohy hampiasa tetikasan-javakanto iarahana mandray anjara eny amin'ny toerana iraisan'ny daholobe mba hisarihana ny saina ho amin'ny faneriterena ary hamondronana ny olona mba hihetsika.
Pikasary lehibe eo amin'ny 16th Street station avy amin'ny mpampiasa Instagram oohlulu.
GV: Iray amin'ireo tanàna mifangaro indrindra ary be fandeferana eto Etazonia i San Francisco, ahoana no ahafahantsika manampy hitondra izany kolotsaina izany hitety an'i Etazonia?
TM: Araka ny hevitro, mifangaroharo sady mandefitra i San Francisco fa isika koa dia manana olana amin'ny fanariana ilay fahasamihafana nateraky ny vidim-piainana lafo. Mino aho fa afaka asehontsika hoe tsara ilay fahasamihafana ary ny olona miara-miasa dia manao izay hahalasa izao tontolo izao ho toerana iray tsara kokoa, mety ho hafatra mahery ho an'ny sisa amin'ny firenena izany.
GV: Inona no torohevitra omenao ho an'ny olona hafa volonkoditra, mpifindra monina, na mpikambana amin'ny vondrom-piarahamonina LGBTQ izay miady mafy mba hahita fahafahana mirotsaka hiaraka amin'ilay lafiny iray hafa izay nifidy an'i Trump?
TM: Heveriko, amin'ny fotoana iray rehefa manomboka mankahala ny lafiny iray ianao, tsy mahita azy ireo amin'ny maha-olona azy intsony ianao ary lasa manana endrika fahavalo izy ireny. Mitsahatra tsy hitanao intsony ny adiny sy ny fanaintainana izay iaretany. Amin'izay fotoana izay, ny herisetra dia miantso herisetra hatrany, ary araka izay tian'i Mahatma Gandhi holazaina “ny maso solon'ny maso dia mamela izao tontolo izao ho jamba”. Izany no zavatra atahorako indrindra aorian'izao fifidianana izao. Tonga ny fotoana iarahana sy hijoroana miaraka ho an'ilay Amerika ireharehantsika rehetra sy tsy ho iray hitondra tombontsoan'ny vitsivitsy monja.
GV: Mamely maro amin'ny maha-ianareo anareo ny drafitr'i Trump ho an'i Amerika: mpifindra monona, Silamo, vehivavy. Inona no manome fanantenana anareo?
TM: Nanome ahy fanantnana betsaka ity rindrina ity, tena marina. Ny famakiana ireo hafatra an-jatony avy amin'ny olona izay manohana ny mpifindra monina, izay manaiky ny finoana hafa, izay mampirisika handray andraikitra. Raha tahaka ny voazarazara ny firenena, izaho kosa faly dia faly mahita ny hamaroan'ny olona mifoha amin'ny andavanandrom-piainany ary manomboka mirotsaka mandray andraikitra amin'ny olana lehibe kokoa.